🥇 ▷ Google ma soo saari doontaa taleefannada casriga ah ee Pixel ee Vietnam? ✅
Google ma soo saari doontaa taleefannada casriga ah ee Pixel ee Vietnam?
Waa macquul in la fahmo sida xiisadaha u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ay u saameynayaan isu dheelitirka suuqa mobilada, iyadoo la tixraacayo warbixin uu maanta daabacay joornaalka reer Japan ee Nikkei, kaasoo yiri Google waxay bilaabi doontaa isbeddelka wax soo saarka Pixel casriga ah ee Fiyatnaam.
Google: Pixels waxaa laga soo saaray Vietnam?
Adeegsiga xaaladaha xilligan waa muhiim, maxaa yeelay ma jiro wax xaqiijin ah oo arrintan la xiriira. Kooxda Mountain View waxay dooran doonaan a dhirta duugga ah waagii hore ay maamuli jireen Nokia, kuna yaal gobolka waqooyi ee Bac Ninh. Aaggaas, hadda waxaa jira warshado ka shaqeynayay sanado badan aaladda Samsung, markaa bigG wuxuu shaqaaleysiin karaa shaqaale khibrad u leh ka shaqeynta shirkadaha South Korea.
Kala guurka ayaa u oggolaan doona Google inuu ka fogaado codsiyada cusub ee loogu hanjabay Trump ee la xiriira labada dhoofinta Shiinaha kor u qaad heerka wax soo saarkaKaalay soo bandhig 8 ilaa 10 milyan oo taleefanno casri ah ka hor dhamaadka 2019. Tan waxaa ku jiri doona moodallo horey suuqa ugu jiray (sida Pixel 3a iyo 3a XL oo lagu dhawaaqay bilihii la soo dhaafay) iyo Pixels 4 oo la hubo in la soo bandhigi doono Oktoobar.
Sida laga soo xigtay IDC, Google wuxuu adduunka ugu qeybiyay ilaa 4.7 milyan oo taleefanno casri ah sanadka 2018, wuxuu helay 0.3% of saamiga suuqa. 2019 wuxuu ku bilaabmayaa shaashad kale, sidaa darteed lixdii bilood ee ugu horreeyay sanadkan, 4.1 milyan unug ayaa la gaarey, gaar ahaan Thanksgiving Pixel 3a XL ee aan kor ku soo sheegnay oo bixiya qiimo aad u wanaagsan marka la barbar dhigo qiimaha ugu yar ee qalabka iyo hubaalnimada. ee ah inaad hesho cusboonaysiinta waqtigeedii Android.
Sida aan sidoo kale u qorey shalay laxiriirta dadaalkii ay sameeysay VinSmart ee maxalliga ah iyadoo lala kaashanayo Fujitsu iyo Qualcomm, Vietnam waxay umuuqataa inay heysato dhamaan cadeymaha si ay u noqoto aag ay jeceshahay protagonist-ka adduunka teknolojiyadda sare. Google sidoo kale waxay la mid noqon kartaa aaladaha kale sida hadal caqli badan Y Shaashadda Sirdoonka ee khadadka Rumah iyo Sarang.